के म Canva.com, Staples, वा कुनै अन्य अनलाईन प्रिन्टरमा व्यवसाय कार्डहरू प्रिन्ट गर्न सक्छु? - Print Peppermint
डिसेम्बर 4, 2019 | मार्केटिङ, मुद्रण, सुरूवात
के म स्टेभल्स वा कुनै अन्य अनलाईन प्रिन्टरमा Canva.Com बाट व्यापार कार्डहरू प्रिन्ट गर्न सक्छु?
के तपाईंले कुनै एक अनलाइन डिजाईन गर्ने साइटहरू जस्तै Canva.com वा अन्यमा तपाईंको व्यवसाय कार्ड डिजाईन गर्नुभयो? बधाई! हो, हामी सहमत छौं; यो एउटा डिजाईन र प्रिन्ट लिन गाह्रो काम हो। हामीले के याद राख्नु पर्छ कि हामीले त्यसमा व्यावसायिक टचको स्तरको साथ कार्डहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ।
टेक्नोलोजी कसरी मद्दत पुर्‍याउँछ?
आज, केहि साइटहरूले निःशुल्क व्यापार कार्ड डिजाइन र डाउनलोड विकल्पहरूको लागि सहयोग प्रस्ताव गर्दछ। त्यहाँ यी कार्डहरू प्रिन्ट गर्नका लागि पनि तरिकाहरू छन्। यी साइटहरूले तपाइँलाई सोध्ने छन् उनीहरूको नि: शुल्क योजनाहरूमा साइन अप गरेर डिजाईन सुरु गर्न। त्यहाँ एउटा क्याच छ? नि: शुल्क योजनाहरूको तिनीहरूको डिजाइन डाटाबेसमा सीमित पहुँच छ र तपाईंलाई ठाँउ र व्यवसायिक हेर्ने कार्डमा कसैको लागि अनुकूलित गर्न अनुमति दिदैन। यसको मतलव केवल भुक्तान गरिएको सदस्यतामा भुक्तानी र अपग्रेड गर्दा मात्र, तपाईं खोज्नुहुने उचित डिजाइनहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
त्यस्तै, मार्क्सहरू सही पाउन तपाईंले चुनौतीपूर्ण पाउनुहुनेछ। यसको मतलब कार्डमा प्रिभरिंगमा ओभरल्यापिंग डिजाइनहरू वा फन्टहरू हुन सक्छन्। यो लाइन पर्फोरेशन्स काट्ने तरीकामा आउँदैछ। संक्षेप मा, प्रत्येक कार्ड अन्य भन्दा फरक फरक हुन सक्छ।
ग्राफिक डिजाइनरहरू बनाम अनलाईन नि: शुल्क साइटहरू- कुनचाहिँ राम्रो छ?
तपाईं अनलाइन साइटहरूबाट कार्डहरू डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं बहिष्कृत डिजाइनहरू चाहनुहुन्छ भने, अनुकूलनको लागि एक वास्तविक डिजाइनरसँग परामर्श गर्न सधैं राम्रो हुन्छ। एक डिजाइनर विचार गर्नुहोस् जब तपाईं विचारहरूको अभावमा हुनुहुन्छ र सूचनाहरूको स्पष्टता यी भ्रमण कार्डहरूमा दिनका लागि।
अन्य धेरैले यस पक्षलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् र भन्दछन् कि तपाईं अनलाइन साइटहरूमा पनि आवश्यक कागजको गुणवत्ता छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। जहाँसम्म, कि भने, जबसम्म डिजाइन यसको लायक छैन, कागज गुणवत्ता अधिक गर्न सक्षम हुनेछ।
यो अनलाइन साइटहरू र वास्तविक पेशेवर ग्राफिक डिजाइनरहरूको बीचमा छनौट गर्न तपाईको लागि वास्तवमै छ। यदि तपाईंलाई एकल घटनाको लागि साधारण डिजाइन मात्र चाहिन्छ भने, दिमागमा लामो अवधिको प्रयोग बिना, यी अनलाइन साइटहरूले गर्नेछन्। जे होस्, यदि तपाईं पूर्ण विकसित व्यवसाय प्रस्तावको लागि जान चाहानुहुन्छ भने, पेशेवर डिजाइनरहरू आदर्श हुनेछन्।
At Print Peppermint, तपाईं प्रभावशाली डिजाइनहरूको एक विशाल पोर्टफोलियो प्रस्ताव सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरहरूको पार तपाईं आउनुहुनेछ। उद्योगको अनुसार तपाईले आफ्नो ब्रान्डको लागि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई अहिले नै कल गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् डिजाइनरहरूले तपाईंलाई सबैभन्दा प्रभावशाली व्यापार कार्डहरू प्राप्त गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्छन्!
← व्यापार कार्ड स्क्यानर: के तपाईंलाई वास्तवमै २०१ 2019 मा एक आवश्यक छ? केवल एक तस्वीर तस्वीर
घर जग्गा चिन्हहरू के बनेका हुन्? →